Ungasarudza Sei Iyo Yakakodzera Kutumira Nzira yeChitoro Chako? - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Nezve Kudonhedza Academy sei nzira Shipping
Ungasarudza Sei Iyo Yakakodzera Kutumira Nzira yeChitoro chako?
Izvo zvakakosha kusarudza iyo chaiyo nzira yekutumira yechitoro chako. Uye chiratidzo chekutanga-chiratidzo cherudzii rwebasa iwe raunoshongedzerwa kuendesa vatengi vako. Iwe unofanirwa kusarudza nzira yekutumira iyo inogona kukupa iwe yakanakira dhizaini iyo isingori chete inosanganisira mutengo asi zvakare inosanganisira kukurumidza nguva, nzvimbo, inoyevedza sevhisi mhando, nezvimwe. vhara yako mari, uye upe izvo zvingasarudzwa nevatengi vako. Chinyorwa chino chichaunza zvekutarisa kana uchisarudza nzira yekutumira uye zvimwe zvakanaka nezvayakaipira yenzira dzinozivikanwa dzekutumira kuti zikuraire iwe kuenzanisa nzira dzekutakura uye sarudza nzira chaiyo yekutumira.
1. Rudzi rwezvigadzirwa
Chinhu chekutanga chaunofanira kufunga ndechii chigadzirwa chauchange uchitengesa. Iwe unofanirwa kufunga nezve saizi uye huremu hwezvigadzirwa zvako. Ndeupi musiyano muhukuru uye huremu kubva kune ako madiki, akareruka maSKUs kune ako makuru, anorema kupfuura maSKU? Uye iwe unofanirwa kunyatsoongorora saizi uye uremu zvinorambidzwa, maumbirwo, uye kupihwa masevhisi kana uchiongorora nzira dzakasiyana dzekutakura. Dzimwe nzira dzekutakura dzinogona kunge dzisiri kutumira zvinhu zvinodhura kana kusimba. Uye mamwe anogona kunge aine zvimwe zvinorambidzwa senge UPS zvine huremu hunorema hwe150lbs (68kg) uye zvirevo zvekutakura zvezvigadzirwa zvemamwe makuru. Kutumira zvigadzirwa zvakakura zvinopfuura huremu uye saizi muganho weimwe nzira dzekutumira zvinoiswa kune yekuwedzera mari kana mutengo wakakosha.
Kana iwe uchironga kutumira zvigadzirwa zvese munyika nepasirese, chitoro chako chinofanira kusanganisira nzira dzepasirese uye dzemuno nzira. Icho chidimbu chekubatanidza nzira dzepasirese uye dzenyika dzekutakura kuti uone kuti mapakeji ako anogona kuzviita kunzvimbo yako yaunoda nenguva.
Izvo zvakakosha kuti iwe uongorore inotarisirwa nguva yekuendesa kubva kune emuno uye epasi rese nzira dzekutakura Vatengi vane kudiwa kukuru kwekuda panguva. Ivo vanoda kuziva nguva yekutarisira pasuru yavo uye voiunzira kwavari nekukurumidza. Zvekutumira zvemuno, iwe unogona kusanganisira iwo-ezuva rimwechete kutumira pamutengo unodhura zvishoma kuti uratidze vatengi vako neyakareruka yesarudzo dzekuwedzera. Uye zvekutumirwa kune dzimwe nyika, unogona kunge uri kutarisa nguva yemazuva matatu kusvika kumavhiki maviri, zvinoenderana nenyika uye nzira dzekutakura dzinobatanidzwa.
Mari yekutumira inonyanya kuenderana nesaizi uye huremu hwezvigadzirwa, kwaunoenda, pamwe nenzira yekutumira. Uye nezvechigadzirwa chimwe chete kunzvimbo imwechete, nzira yekutumira ichave nemhedzisiro pamutengo. Kana iwe uchida kupa yemahara kutumira, iyo mari yekutumira ichave yakakosha zvakanyanya kune komputa purofiti uye zvinogona kurasikirwa. Izvo zvinodikanwa kuti uwane iyo chaiyo nzira yekutakura iyo inopa masevhisi pamutengo wakanaka kuitira kuti iwe ugone kupa vako vatengi vako akanakisa ekutumira mitengo ayo anozochengetedzawo kuvimba kwavo uye kuvimbika.
Unogona kutsvagisa rekodhi yekutevera nzira yekutarisa kuti uone kana iine mukurumbira wakanaka uye inogona kuvimba nayo. Muchiitiko chekuti iwe ukasarudza anotakura anotakura zvichibva pamitengo yavo yakachipa chete, asi unozopedzisira wave mumvura yakadzika iyo chinhu chinorasika kana kuendesa chakanonoka. Ita cheki yekumashure nekuverenga maFAQs uye ongororo yemushandisi kuti udzidze kuti ndedzipi nzira dzekutakura dzine nhoroondo diki yekurasa zvinhu uye kunonoka mapakeji. Iwe unogona zvakare kutsvaga mamwe mabhenefiti aanopa uye izvo vamwe vashandisi vanofunga nezvazvo.
6. Kuchengeta Services
Chiratidzo chinoshamisa kusarudza nzira yekutumira ine anoshamisa ekuteedzera masevhisi. Mazhinji makambani anotumirwa ane mukurumbira ane webhusaiti uko vatengi vanogona kushandisa manhamba ekutarisa kuti vatarise pamamiriro epakeji pasuru inosanganisira yakatumirwa, yatotumirwa, munzira, kana kunonokerwa pamwe nenzvimbo dzemapakeji kuti vateedzerwe nguva dzose. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti utarise kuendesa uye nyore kurongeka nevatengi kana iko kutumira kana kuendesa kunetsekana kukamuka.
Kana inishuwarenzi iri chinhu chakakosha chekutumira kuchitoro chako uye zvigadzirwa, tora nguva yekuenzanisa nzira dzekutenga kuti uwane imwe inopa mutengo unodhura. Iyo inishuwarenzi kazhinji haina mari yakawanda asi inounza rugare rwepfungwa kune vese vatengesi nevatengi.
Nzira Dzakanyanya Kutumirwa
EPacket inzira inozivikanwa yekutakura kutumira zvinhu zviri pasi pemakirogiramu maviri kubva kuChina zviri nyore. Inogona kutumira kunyika makumi matatu nemashanu pasi rose uye inofanira kutanga kuChina. Mutengo wepasuru unobva pahuremu hwechinhu uye kwainoenda chinhu chakatumirwa. Yayo nguva yekutumira kazhinji inokurumidza kupfuura dzimwe nzira zhinji dzinobva kuChina. Kazhinji kazhinji, vatengi vanogashira mapakeji avo mumazuva gumi, nemazuva makumi maviri ari pamagumo anononoka. Unogona kuteedzera yako ePacket chinhu.
Nekudaro, ichiri Post Postal Service zvinoreva kuti inogona kukanganiswa nezvinhu zvakawanda zvematongerwo enyika sekuramwa kwepositi, chibvumirano chepositi. Saka pane kazhinji zvinowirirana zvichienderana nekuti pasuru inotumirwa kupi.
CJPacket zvakare iri inozivikanwa nzira yekutakura yekutakura zvinhu zvidiki kubva kuChina uye chiri chikamu cheCJDropshipping inova yekudonhedza chikuva iyo inopa chigadzirwa kutsvagisa, kurongeka kugadzirisa, uye kutumira kune vanodonhedza kubva kuChina kuenda pasirese. Inogona kutumira kunyika zhinji nematunhu kutenderera pasirese. Izvo zvinodhura kana icho chigadzirwa chakaunzwa panguva imwe chete. Uye zvakare inopa logistic yekutevera kubva kuKutanga kuenda kwairi kuenda kuti iwe unogona kuisa iyo yekutevera nhamba uye tarisa iyo package yezvinhu zvine ruzivo. Mune imwe nyika, inopa yakakwana logistics cheni.
China Post iChina Yepamutemo Inoshanda Service uye yakabatana neChina EMS. Iyo yakajairika sevhisi yekuendesa nekuda kwekuti inowanzo kuve yakachipa kune anotakura, kunyanya kumakambani anopa mahara kutumira.
Kana iwe uri muChina uye uchitaura Mandarin, inogona kunge iri mhinduro yakanaka kwauri. Uye iwe unogona kuteedzera mapakeji online uye kufonera iyo yekubatsira nhamba kuti utaure kune munhu mupenyu.
Zvisinei, zvakashata kutumira pasi rose nekuti hazvipe rubatsiro muChirungu izvo zvinoita kuti zviome kubvunza nezve package. Uye China Post inozoshandura mapakeji kuenda kune mumwe mutakuri kana yabva kuChina izvo zvinokonzeresa kunyongana pamusoro pekuti iro pasuru riripi chaizvo. Uye kazhinji zvinononoka zvisingaite kuti vatengi vagamuchire mapakeji avo mumavhiki mana, kunyangwe mavhiki masere.
4. AliExpress Kuteedzera Sevhisi
AliExpress Packaging Service inowanzo kuve yemahara kana iwe uchidonha kubva kuAliExpress kunze kwekunge mutengi aripa mari yekutumira. Mune zvimwe zviitiko, saiti inogona kubhadharisa vatengi $ 1- $ 3 kuti vashandise sevhisi. Mutengi anogona kubhadhara $ 8- $ 10 yekuwedzera kuti pasuru isvike kumba kwavo nekukurumidza sezvazvinogona. Inopa mutengi sarudzo yekutevera pasuru yacho uye yakanyatsoita mushe.
Zvisinei, kune mamwe matambudziko. Ivo vanoshandisa akati wandei masevhisi ekutakura anosanganisira Singapore Post, Posti Finland, Correos, DHL, Direct Link, uye SPSR pachinzvimbo cheyakajairwa sevhisi yekutakura inoita kuti nguva yekutakura isiyane zvakanyanya. Uye kuendesa kwayo kunononoka kuti vatengi vanogashira mapakeji avo mumazuva makumi maviri ebhizinesi, kunyangwe mavhiki matanhatu.
23 maawa apfuura
Pese pese kana vakatadza kuendesa chigadzirwa nenguva, vanopindura tikiti neshoko iri. Saka zvisizvo. Izvi zvinoita semeseji template yezvikonzero.
---Chigadzirwa chakasvika muimba yedu yekuchengetera zvinhu musi wa21, asi chakatadza kupasa ongororo yemhando. Naizvozvo, takumbira imwe nyowani mukufambisa kuenda kudura redu, izvo zvinotora mazuva matatu. Isu tichatumira zvigadzirwa zvako kana zvangozara zvese. Ndatenda nekunzwisisa kwenyu. Iva nezuva rakanaka! Rukwaziso rwose--- ... Ona ZvimweOna Zvishoma
𝐇𝐨𝐰 𝐓𝐨 𝐅𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞 𝐎𝐮𝐭 𝐖𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐓𝐨 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 的 𝐑𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 ..
Paunenge uchidonhedza, iwe uchafanirwa kunyatso funga nezve nyika dzipi dzauri kunanga
Kusarudza nyika dzakakodzera dzekunongedza unogona kuve mutsauko pakati peads yako kubudirira nekutadza
Pane zvinhu zvishoma zvakakosha zvaunofanira kufunga nezvazvo kuti usarudze kuti ndedzipi nyika dzaunofanira kunanga, senge: ⁣
𝟏 - 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐆𝐃𝐏 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚⁣
GDP per capita metric inoyera avhareji yemari inowanikwa nemunhu munyika pagore.⁣
Iyo GDP pamunhu inodyidzana zvakanyanya neavhareji mari inoraswa, sezvo iyo yakawanda yaunotambira, ndiyo yakawanda iwe yaunoshandisa (pamhepo).
Kutarisa nyika dzine GDP yakaderera pamunhu zvinowanzokupa mwero wakaderera wekushandura sezvo zvigadzirwa zvako zvinowanzovadhurira uye zvinozoshandiswa kumitengo yakaderera munyika yavo.
Ndokusaka nyika dzakanakisa dzekudonhedza kunanga ndidzo dzine GDP yepamusoro pamunhu
Edza kunanga nyika dzine GDP per capita yeinenge $30k, saka iwe unozoziva kuti munhuwo zvake achasara neimwe mari yekutenga zvigadzirwa zvako. .
Unogona kuwana zviri nyore runyorwa rwenyika dzine inokwana madhora makumi matatu eGDP pamunhu pagoogle.⁣
𝟐 - 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐔𝐬𝐞𝐫𝐬⁣
Kana vashandisi vesocial media munyika vakakwira, ruzhinji rwevanhu varipo pasocial media seFacebook, Instagram nezvimwe. Izvi zvinokutendera kuti usvike kuwanda kwevanhu vanogoneka nemashambadziro ako chinova chinangwa chedu. .
𝟑 - 𝐒𝐡𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞⁣
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha zvinofanirwa kutariswa pakusarudza kuti ndedzipi nyika dzaunonongedza, nekuti kana nguva yekutumira yakarebesa kuti chigadzirwa chako chiunzwe saka hazvina kukodzera kushandisa mari pakushambadzira kwakanangana nenyika iyoyo. .
Kana uchiri kunanga nyika dzakadai dzine nguva refu dzekutumira, unozopedzisira wava nevatengi vasingafare uye uchawana yakawanda yekuchajisa/kudzoserwa. .
Izvi zvinhu zvitatu zvakakosha zvekuchengeta mupfungwa kana uchifunga kuti ndedzipi nyika dzaunofanirwa kunanga nemashambadziro ako. .
Ndinovimba izvi zvakakubatsira kunze, kana uine chero mibvunzo kana uchida chero rubatsiro, ndizivise mune zvakataurwa. .
Wish You The Best!⁣
#facebookadsexpert #facebookadstips #facebookadvertising #facebookads #shopifymarketing #shopifyecommerce #shopifytips #shopifyexpert #shopifydropshipping #shopifybusiness #business2022 ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Tags afership, aliexpress, cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, cjpacket, dropshipping, kudonhedza nzira dzekutumira, epacket, nzira dzekutumira, kutumira kutumira
← Wepamusoro 5 Mari Kugadzira Indasitiri pano muPH pasina Investment → Wepamusoro 7 Zvakanakisa Zvigadzirwa zveRunako izvo Vanhu Vazhinji Varikushandisa Izvozvi